စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာအတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား | ဧရာဝတီ
လင်းသန့်| January 31, 2013 | Hits:13,646
| | သတင်းစာများ ရောင်းချရန် စီနေသူ တဦး (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာတွေဖြစ်လာအောင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ မကြာသေးမီက အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုမှုတွေအပေါ် သံသယဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျယ်လောင်လာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာကြီးတွေမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ကထောင်ထားတဲ့ မိုင်းကွဲမှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ အရပ်သား သေဆုံးမှုသတင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဖြတ်ကပ်ညှပ် ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်ပွဲ ဆူသွားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ မနှစ်က ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ အဲပုဂံလေယာဉ် ပျက်ကျစဉ်က လေယာဉ်နဲ့ တိုက်မိခဲ့တဲ့ ဟဲဟိုး ဒေသခံ ကွယ်လွန်သူ ဦးပြား စီးလာခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဖြတ်ကပ်ညှပ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ ၃ စောင်လုံးမှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
မြန်မာတိုင်းမ်းဂျာနယ်က အခုလို အစိုးရသတင်းစာက ဖြတ်ကပ်ညှပ် ဓာတ်ပုံသုံးမှု သတင်းကို အစောဆုံး ထုတ်ဖော် ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ သတင်းဓာတ်ပုံ မှားယွင်းဖော်ပြမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားရေး ဒု ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကလည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ချက်ချင်း ၀န်ခံပြီး ဖြေရှင်းချက် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယနေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာလည်း တောင်းပန်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အမှားကိုလည်း ရှောင်လွှဲလို့မှ မရဘဲကိုး … နော်။ သတင်းစာ၊ မီဒီယာ လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုး သတင်း မှားတာတွေ၊ ဓာတ်ပုံမှားတာတွေတော့ ကျနော်တို့ ကြုံရမှာပေါ့။ သို့သော် ဒါကြီးကကျတော့ အရမ်းကြီးမားတဲ့ အမှားကြီးဖြစ်တော့ ကျနော်တို့လည်း ဒါ တော်တော် သင်ခန်းစာလည်း ရပါတယ်။ ကျနော့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အယူအဆ ပြောရရင် ကျနော် ရှက်လည်း ရှက်ပါတယ်” လို့ ဒု ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ရက်မှာ ဒု ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်အပေါ် သဘောထားအမြင် ဝင်ရောက်ရေးသားမှုတွေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ ကျော်ဇေယျာမြင့် အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးစွဲသူတဦးက “သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံက ကျနော်တို့ သတင်းစာက သတင်းထောက်နဲ့ အယ်ဒီတာတွေ ရေးသား ဖော်ပြထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းရော ဓာတ်ပုံပါ သတင်းစဉ်ဆိုတဲ့ ဌာနက ပို့တာကို သတင်းစာတိုက်များက မထည့်မနေရ ထည့်သွင်း ဖော်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆရာ ဦးရဲထွဋ် ပြန်လည်ဖြေကြားပုံက သတင်းစာတိုက်က သတင်းထောက်တွေ အယ်ဒီတာတွေ ညံ့ဖျင်းပြီး မစိစစ်ဘဲ ဖော်ပြထားတာမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီပြောကြားချက်ကို လုံးဝ လက်မခံ ပါဘူး” လို့ တုံ့ပြန်ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာတွေဖြစ်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အစိုးရသတင်းစာများနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူကဆက်လက်ပြီး “သတင်းစာကို သတင်းစဉ်က ရာနှုန်းပြည့် လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ် ချုပ်ကိုင်ထားပြီး သတင်းမှားတိုင် ပုံမှားတိုင်း သတင်းစာတိုက်က အယ်ဒီတာတွေ သတင်းထောက်တွေ ပေါ့လျော့မှုလို့ပြောနေတာက လုံးဝ မဖြစ်သင့်တော့တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကို ဒု ၀န်ကြီးတဦးအနေနဲ့ အမှန်တကယ် မသိတာလား၊ သိလျက်သားနဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ သတင်းစာတိုက်က လူတွေကြား ထင်မြင်လွဲမှားအောင် လုပ်နေတာလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ သတင်းစဉ်ရဲ့ အမှားတွေကို သတင်းစာတိုက်က မြင်လို့ ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိသလို သတင်းစဉ်မှ ဗိုလ်ပြုတ်များရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များသာ အမှန်ဟု အတင်းအဓ္ဓမ စီရင်ဆုံးဖြတ်နေတာကလည်း လုံးဝကို မဖြစ်သင့်တော့တဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ ခင်ဗျာ။ ဆရာ ဦးရဲထွဋ်အနေနဲ့ အောက်ခြေအထိ ကွင်းဆင်း လေ့လာ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်” လို့ ဆက်ရေးထားပါတယ်။
အစိုးရသတင်းစာတွေရဲ့ သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိရှိနိုင်ဖို့ အစိုးရသတင်းစာတိုက်တွေကို ဧရာဝတီက ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် တစုံတရာ ဖြေကြားခြင်း မရှိပါဘူး။
မြန်မာ့သတင်းစဉ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိဟောင်း တဦးကတော့ အစိုးရပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို သတင်းစဉ်ကပဲ သတင်းစာတိုက်တွေကို ပို့ပေးရပြီး ဒါကို အယ်ဒီတာချုပ်တွေက ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိကြောင်း၊ ဒါကလည်းအဆင့်ဆင့် အမိန့်က စီးဆင်းပြီးသားဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အခု ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ပြောဆိုမှုဟာ စနစ်ဟောင်း အတိုင်းပဲ ဖြစ်နေဆဲပဲလို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
“ကိစ္စ တခုဖြစ်ပြီဆိုရင် အကြီးဆုံးကနေ အောက်ဆုံး အငယ်ဆုံးထိ ပုံချလိုက်တာ များပါတယ်။ အမှန်ကတော့ Confirmation လုပ်တာတွေ အားလုံးက အထက်ဝန်ကြီးတွေ မသိဘဲနဲ့ ထုတ်လို့မရဘူး။ သိသလောက်ကတော့ အခု နောက်ပိုင်း သတင်းစာထဲမှာ ထည့်တဲ့ သတင်းရော၊ ဓာတ်ပုံရော ကိစ္စတိုင်းမှာ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ Authority အတိုင်းပဲ လုပ်နေရတာ” လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းစာတွေမှာ မြန်မာ့သတင်းစဉ်က သတင်းတွေ ဖော်ပြပေးနေခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးရဲထွဋ်က ယခင်ကတော့ အများစုက သတင်းစဉ်က ပေးပို့လာတာတွေဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ ပြောင်းလဲလာကြောင်း ပြောပါတယ်။
“အရင်တုန်းကတော့ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ သတင်း တ၀က်ကျော်လောက်က သတင်းစဉ်ကလာတဲ့ သတင်းပါ။ ဒါလည်း အစိုးရသစ်လက်ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ စ မလုပ်ခင်တုန်းက ဒါ တကယ် ရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေပါပဲ။ အခု နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလာတယ်” လို့ ဦးရဲထွဋ်က ရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်။
“အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှုကို ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ သတင်းစဉ်က ထုတ်ပေးတဲ့ သတင်းတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျော့လာပြီးတော့ သတင်းစာတိုက်တွေက ကိုယ့်ဟာကို သတင်းရှာဖို့ ကျနော်တို့ ဦးစားပေးနေတာပေါ့။ နောင် အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှု သတင်းစာ ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ သတင်းစဉ်ကတော့ Official Press Statements တွေကို အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှု သတင်းစာတွေရော နောက်တခါ အပြင်မှာ ရှိတဲ့ ဂျာနယ်တွေရောကို ဖြန့်ပေးတဲ့ဌာန ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ သူ့ Role တွေကတော့ တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီး ပြောင်းသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အခုလို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေအနေနဲ့ အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှု မီဒီယာအဖြစ်ကို ဦးတည်သွားနေချိန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှားအယွင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပြီး အဓိကကျတဲ့ ကြိုးနီစနစ်ကြီး မရှိတော့မှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်းစဉ်မှာ တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူ အရာရှိဟောင်းက မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
“အဓိကကတော့ ကြိုးနီစနစ်ကြီး ပပျောက်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီစနစ်ကြီး မပျက်သေးသရွေ့ ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှု မီဒီယာဆိုတာ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုသူ ပြည်သူဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကို ကိုးကားပြီး AFP က ရေးတာကို ဘန်ကောက်စ်ပို့ သတင်းစာမှာ “မြန်မာ့အလင်း အင်္ဂလိပ်ပိုင်း သတင်းစာကို တင်ဒါစနစ်နဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့ ၀န်ကြီးဌာန (ပြန်ကြားရေး) နဲ့လည်း သဘောတူပြီပါပြီ။ လူအရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ဒီသတင်းစာကို အဆင့်မီမီ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိဖို့ဆိုတာ ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Linyone January 31, 2013 - 10:27 pm	Dirty propaganda will make the government look even uglier and even more hateful. People are not so stupid to figure it out who is telling the truth and who is lying. The government has accused of KIA and KNU for planting bombs to kill innocent citizens, actually the government has been the one who planted those bombs. KIA is media friendly while Burmese junta is never friendly to the media. Because, the KIA has nothing to hide since they have been fighting for freedom proudly. The Burmese junta has nothing to be proud of. Raping, killing and maiming are not the thing people can be proud of. The reason why the Burmese military is unfriendly to the media: They always have something to hide from public eyes.
Reply	နေခန့်နိုင် February 11, 2013 - 7:38 am	မီဒီယာဆိုပြည်သူအသက်ပါမီဒီယာဥပဒေကိုတိတိကျကျလိုက်နာအောင်